သဘောၤၤရွက် ( အဖိုပင် )တွင် ရှိသော ဆေးဖက်ဝင်စွမ်းရည် – XB Media Myanmar
သဘောၤၤရွက် ( အဖိုပင် )တွင် ရှိသော ဆေးဖက်ဝင်စွမ်းရည်
သဘောၤၤရွက် ( အဖိုပင် )ဆေးဖက်ဝင်
၁ – အဆုပ်ကင်ဆာ ၊အစာအိမ်ကင်ဆာ ၊သားအိမ်ကင်ဆာ ကင်ဆာအမျိုးမျိုးကိုပျော က်ကင်းစေ
၂ – သဘောၤအဖိုအရွက်ကိုရေစင်အောင်ဆေး. အရည်ကိုညှစ်ယူ မနက် / ည ရေနွေးကြ မ်းပုံ တစ်လုံးစီသောက်ပေး တစ်လကျော်သောက်လျက် ကင်ဆာရောဂါပျောက်။
၃ – သွေးကျဲဆေးသောက်နေရသူနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူတွေကသဘောၤရွက်မသုံးသင့်ပါ
၄ – ဝက်ခြံပျောက်ချင်ရင် သဘောၤရွက်ကို နေမှာလှန်းပြီး ချေပေး ရေနဲ့ရောမျက်နှာမှှ လိမ်းပေး
၅ – အစာချေအားကောင်း သဘောၤရွက်မှာပါတဲ့ဓာတ်က အစာချေတာအားပေး အစာစား ချင်စိတ်ကိုပိုစေမယ်
၆ – သဘောၤရွက်ရေနွေးကြမ်းလုပ်ရင် အပူချိန် ၁၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်သာရှိသင့် ကလေး များ သဘောၤရွက်အစိမ်း ရေနွေးထဲကို ဆားအနည်းငယ်ထည့်သောက်စေပါ။
၇ – သွေးလွန်တုတ်ကွေးကိုသက်သာစေမယ် သဘောၤရွက် ၅ရွက်ကို ရေလီတာတစ်ဝက်နဲ့ပြုတ်သောက်
၈ – ကငဆွာအတှကသွဘောၤပငကွထှကတွဲ့အစေးဟာ ဆေးတနခွိုးရှိ. ရငသွား , အဆု ပွ, ရှ ကွ ရှ ကွ ,သားအိမဝွ,အသညွးကငဆွာတှအတှကေသွုံး နိုငတွယလွို့ိဖလောွ ရီဒါတကကြသိုလမွှ သုေ တသနလုပသွူတှကဆေိုပါတယွ။
၁၀ – သဘောၤပငကွ လကေိုပကှစွေ ၊ မီးယပမွှနစွေ ၊ ဆီးရှှငစွေ ၊ သှေးကိုစငကွှယစွေ သညွးခှအပေူကိုညိမွးစေ
၁၁ – ဝမွးမီးတောကပွှီးအစာကိုကှညကစွေေ သဘောၤရှကကွိုမီးမှိုကပွှီးတို့စားရငွ လထေိုးေ လအောငွ့ ၊ ပငလွယအွူနာ ၊နှလုံးရောဂါနဲ့ခံတှငွး ပကှရွောဂါသကွ သာပှောကွ
၁၂ – လကဖွကထွဲသဘောၤရှကမွီးအုံးပှီထညွ့စားရငွ လကဖွကကွှောငွ့ဖှဈတဲ့ နောနဲ့ဲ အိပမွေ ပှာွှ ခငွးကိုသကသွာစေ
၁၃ – နားအူ နားကိုကွ. နားလထှကွေ နားလေးတို့အတှကွ သဘောၤရှကကွို နှမွး ဆီ လိမွးကပရွတယွ။
၁၄ – အနာကှောငွ့ရောငရွမွးရငသွဘောၤရှကနွဲ့စညွးထားပေးရ
၁၅ – ဘကတွီးရီးယားဗိုငွးရပပွိုးတှကေိုဖကှဆွီးပဈကိုယခွနဓြာတှငွးဆဲလတွှကေို ပိုကောငွးအောငလွုပပွေး
၁၆ – အမျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့ ဆီးနည်း ဆီးအောင့်မှကြာလာရင်ကပ်ပယ်အိတ်ယောင် လာရ င် သဘောၤအရွက်အကြမ်းကို မီးကျွမ်းအောင်ကင်ပြီး ရေနွေးဖြူပူပူထဲ ခြွေထည့် ရေနွေး သော က်ပု ဂံ ၂ လုံးစာတစ်နေ့ ၃ ကြိမ်သောက်ပေးရသဘောၤရွက်အနုကို မီးကင်ပြီး တို့စရာအဖြစ် ၂ ရက်လောက်စားပေးရင်သက်သာ ၅ ရက်လောက်စားရင်ပျောက်ကင်းသည်။ ုမှတ်စု
၁၇ – ငါးမျက်စိ အသားမာ မှဲ့အပါး အသားပို များကို ၁ ကြိမ် ၁၀ မိနစ်မျှ သဘောၤဖိုပင် သဘောၤအစေးနဲ့ နေ့စဉ် တိုက်ပေးပါ. ၄-၅ရက်အတွင်းသက်သာ ပျောက်ကင်းစေ သ
၁၈ – ခါးနာ ခါးကိုက် လျှင် သဘောၤဖိုရွက် သုံး လေး ရွက် ခူး၍ ခါးနဲ့ဝမ်းဗိုက် ပတ်အိ ပ်ပါ။ ခင်းအိပ်ပေးပါက ခါးနာ ခါးကိုက် သက်သာမည်။
၁၉ သွားပိုးထိုးပြီး ရေစီးကမ်းပြို ဖြစ်ပါလျှင် သဘောၤဖိုပင် အရွက်ကို အခြောက်လှ န်းပြီး အမူန့်ပြု၍ သွားတိုက်ပါက သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။
၂၀ – အစာအိမ်သမားများအတွက် – သဘောၤဖိုအရွက်စိမ်း ကိုသန့်စင်စွာ သတ္ထုရ ည် ညှစ်ပြီး စတီးဇွန်း ၃ ဇွန်းမျှ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ခွဲစိတ်ရ န်မလို ပါ။
၂၁ – လိပ်ခေါင်းရောဂါရှင်များ – သဘောၤဖိုအရိုး အရွက်ကိုထုထောင်း၍ ရသော အရည် ဖြင့် လိပ်ခေါင်းတွင် လိမ်းပေးပါ ။ ၎င်းအပြင် သဘောၤဖို အပွင့်ကို သုတ်စားပေးပါ။
၂၂ အရေပြားထူအမ်း၍ အဖုအထစ်ဖြစ်သည့် သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း ဖြစ်ပါက အဖိုရွက် နဲ့ ရိုးတံကို ကြိတ်ချေပြီး ကျပ်ထုပ် ထိုးပေးပါကအရေပြားထူခြင်း ပျောက်စေသည်။
၂၃ – ရင်ဘတ်နာပါက – အဖိုပွင့်ကို သံပုရာရည်ညှစ်ပြီး အသုပ်လုပ်စား ပေးရပါ သ ည်။
၂၄ – ငှက်ဖျား – သဘောၤအဖိုပင် ပဉ္စငါးပါးကို ထန်းလျက်နဲ့ ကျိုသောက်ပေး။
၂၅ – အသည်းရောင်သူ ဖောရောင်သူ ချောင်းဆိုးရင်ကျပ် အမြစ်မပြတ်နိုင်သူ ဝေဒနာရှင်များနဲ့ ကင်ဆာရောဂါ များအတွက် သဘောၤအဖိုပင်မှ အရွက်ရည်ကို ပုံမှန် သောက်ခြင်းဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်းခြင်း ကြုံဖူးပါတယ်။
ထိုဝေဒနာရှင်များထဲတွင် စနစ်တကျ ဆေးရုံဆေးခန်းပြသကြပြီး မသက်သာတော့သ ည့်အဆုံး မွေးရပ်မြေတွင် ခေါင်းချတော့မည်ဆိုသောအတွေးနဲ့ပြန်လာကြပြီး ကြားဖူးနား ဝမြန်မာဆေးမီးတိုများနှင့် ကုသရင်း အရှင်းသက်သာသူများလည်း ရှိပါသည်။
ကင်ဆာရောဂါအတွက် ကင်ဆာဆေးများ ဖော်စပ်ရာ ပင်မအရင်းအမြစ်သည် သစ်ပင်များ ဖြစ်သည်။ ကင်ဆာရောဂါလုံးဝ ပျောက်ကင်းစေသောဆေးဝါး မပေါ်သေးသော်လည်း အတော် အတန်သက်သာ၍ သက်တန်းရှည် နေထိုင်သွားကြသည်။
ကင်ဆာဆေးများကို ဆေးများကို ဆေးဖက်ဝင်အပင် မူလ ဆေးသိပ္ပံ၏ အရင်းအမြစ် ကင်ဆာဆေးမှာ ရုက္ခဆေးပင်များသာဖြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် နတ်ဆေးတမျှထင်းရှား လာသည့် အပင်က သဘောၤဖိုပင်လည်း ပါနိုင်ပေသည်။
သိပ္ပံဆေးဝါးနဲ့ ကုသနိုင်သူရော မကုသနိုင်သူရော သဘောၤရွက် သတ္ထုအရည်ကို စနစ် တကျ သောက်သုံးရာက အချို့ရောဂါတို့ သက်သာပျောက်ကင်းခြင်း တွေ့ရသည် ။ဆီကျိတ် ကင် ဆာမိတ်ဆွေတစ်ဦးနဲ့ ဆုံဘူးသည် ဆေးရုံ ၃ ကြိမ်မြောက်တက်ပြီး ဆေးရုံံ ထပ်မတက်ပဲ သဘောၤဖိုပင် အရွက်စိမ်းကို သောက်ရင်း မူလပုံမှန်အတိုင်းနေနိုင်သည် လည်း ရှိပါတယ်။
ထို့ကြောင့် သဘောၤဖိုပင်တွင် ထူးခြားသော ဆေးစွမ်းအင်များ ရှိနေပေလိမ့်မည်။
ရဲမျိုးသူ ( ဗောဓိမြိုင်)
နင်လားဟဲ့ ကင်ဆာ အဖိတ်စင်မရှိ ကင်ဆာ ပျောက်ဆေး (အစ မှ အဆုံး တိတိကျကျသေသေချာချာဖတ်ပါ)